कहाँ छन् दरवारकाण्डमा बाँचेका बीरेन्द्रका दुइ नातीनिहरु : के रहस्य खोल्न सक्छन् ?
काठमाडौ । लोकप्रिय राजा बीरेन्द्र वीर बिक्रिम शाहदेवको परिवारसहित सबै स’खाप भ’एपनि उनका दुई नातिनीहरु जिवित थिए ।
नातिनी गिर्वाणी र सुरंगना अहिले निक्कै ठूला भएका छन् । उनीहरुलाई धेरैले खोजिरहेका छन् तर उनीहरु अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छैनन् ।
सञ्चारमाध्यममा मात्रै होइन औपचारिक कार्यक्रममा समेत कमै मात्रै देखिने गरेका छन् उनीहरु ।
सामाजिक सञ्जाल र सर्च इन्जिनमा समेत उनीहरुको गतिविधि पाउन मुस्किल छ । बरु ज्ञानेन्द्र र धिरेन्द्रका नातिनी, छोरीहरु खुबै चर्चामा छन् । उनीहरु भने पुरै गुमनाम छन् । त्यो बेला निक्कै साना थिए ।
उनीहरु कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पारिवारका अत्यन्त नजिकका आफन्त बाहेक अरु कसैलाई थाहा छैन । जसलाई उनीहरुका बारेमा थाहा छ, उनीहरु यस विषयमा बोल्न चाहदैनन् ।
पूर्व युवराज पारस शाहका छोराछोरीहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भईरहँदा गिर्वाणी र सुरंगना भने कुन दुनियाँमा छन् धेरैलाई थाहै छैन ।
गिर्वाणी र सुरंगनाले ललितपुरको लगनखेलस्थित सेन्ट मेरिज स्कुलमा प्राइमरी तहको अध्ययन गरेका हुन् । त्यसपछि पिता गोरख शमशेर राणाले उनीहरुलाई थप अध्ययनका लागि छिमेकी मुलुक भारत लगेका थिए ।
उनीहरुलाई देहरादुनस्थित वेलह्याम्पस स्कुल भर्ना गरिदिएका थिए । गिर्वाणीले सोही स्कुलबाट गृह विज्ञानमा प्लस टु उत्तिर्ण गरेको बताइन्छ भने सुरंगनाले पनि सोही स्कुलबाट प्सल टु उत्तिर्ण गरिसकेकी छिन् ।
स्रोतका अनुसार गिर्वाणी र सुरंगना अहिले उच्च शिक्षाका लागि बैङ्लोरमा छन् । उनीहरु राजा बीरेन्द्रकी नातीनीहरु अर्थात छोरी श्रुतीका छोरीहरु हुन् । छोरी श्रुतीको त्यही घटनामा मृत्यु भयो । तर नातिनीहरु सकुशल थिए ।
गिर्वाणी र सुरंगना राणा पूर्व राजा स्व. बीरेन्द्रका नातीनीहरु बारे थप
तत्कालीन राजा बीरेन्द्रकी एकमात्र छोरी हुन्, श्रुती शाह । उनको विवाह २०५४ वैशाख २४ मा गोरखशमशेर राणासँग भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पनाति हुन्, गोरखशमशेर ।
श्रुती शाह र गोरख शमशेर राणाकी छोरी हुन्, गिर्वाणी र सुरंगना राणा । गिर्वाणीको जन्म २०५५ असार ८ मा भएको थियो भने त्यसको तीन वर्षपछि अर्थात् २०५७ असोज १६ मा सुरंगनाको जन्म भएको हो । एक बर्षपनि नहुँदै सुरंगना टुहुरो भइन् ।
दरवारकाण्ड हुँदा गिर्वाणी ३ वर्षकी थिइन् भने सुरंगना आठ महिनाकी मात्र थिइन् । अहिले गिर्वाणी २३ वर्षकी भइन् भने सुरंगना २० वर्षकी भइन् ।
भावुक तस्वीर भाइरल
वि. सं. २०६९ को जेठमा डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा फोटो प्रदर्शनीको आयोजना गरे । डा. श्रेष्ठ राजा बीरेन्द्रका चिकित्सक हुन् ।
उक्त फोटो प्रदर्शनी अवलोकनका लागि गिर्वाणी र सुरंगना पनि पुगेका थिए । सोही क्रममा गिर्वाणीको एउटा तस्वीर बाहिरिएको थियो । जुन तस्वीरमा उनले आफ्नो मावली परिवार नियाल्दै आँसु झारिरहेको देखिन्छ । यो तस्वीर अहिले पनि वेलावेला सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल हुने गरेको छ ।
यसअघि गिर्वाणीलाई आमा श्रृती र बुबा गोरखले काखमा लिएको फोटो सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै सुरंगाना जन्मिँदा थापाथलीस्थित प्रसुतीगृहमा खिचिएको एउटा तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो ।
यो तस्वीरमा गिर्वाणीले सुरंगनालाई हेरिरहेको देखिन्छ । यस्तै पिता गोरख शमशेर राणाले गिर्वाणी र सुरंगानालाई डुलाईरहेको अर्को एउटा तस्वीर पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसपछि करिव एक दशकपछि गिर्वाणीको अर्को तस्वीर सार्वजनिक भयो । उक्त तस्वीरमा गिर्वाणी आफ्ना पिताका साथमा बसेको देखिन्छ । त्यसको लामो समयपछि गिर्वाणी आफ्नो मामा पारस शाहसँग बसेको एउटा तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । तर त्यसपछि कुनैपनि थप सामाग्री इन्टरनेटमा समेत भेटिन्न ।
सानीआमा सहितको परिवार
अहिले उनीहरुको परिवारमा ५ जना छन् । पिता गोरख शमशेर राणा, सानीमा दीप्ती चन्द, गिर्वाणी, सुरंगना र दिप्तीकी छोरी सुरवी । दरवारकाण्डमा पत्नी श्रुतिको मृत्युपछि गोरख शमशेरले त्यसको सात वर्षपछि दीप्ती चन्दसँग वैवाहिक सम्वन्ध गाँसेका थिए ।
दीप्ती पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका भाइ कृष्णबहादुर चन्दकी छोरी हुन् । उनीहरुको पारिवारिक सम्वन्ध राम्रो रहेको उनका निकटस्थहरु बताउँछन् । केही वर्ष अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गिर्वाणी र सुरंगना आफ्ना सानिआमासँग फोटोसेसनमा रमाइरहेका थिए ।
किन चाहदैनन् सार्वजनिक हुन् ?
दरवारकाण्ड हुँदा गोरख शमशेर राणा पनि पार्टीमै सहभागि थिए । राजा बीरे’न्द्रलाई गो’ली ला’गेपछि उनी नै सवैभन्दा पहिले बीरेन्द्रको नजिक पुगेका थिए । सोही क्रममा उनलाई पनि गो’ली ला’गेको थियो । उनलाई गो’ली ला’गेको चाल पाएपछि सम्हाल्दै काखमा लिएकी श्रुतिको पनि गो’ली ला’गेर मृत्यु भयो । तर, समयमै उपचार पाउँदा गोरखको भने ज्या’न जो’गियो ।
आफूलाई सम्हालिरहेकी पत्नीसहित ससुराली परिवारको व’शं ना’श भ’एको घटना उनका लागि निकै पी’डादायी बन्यो । यो घटनाले उनलाई वि’क्षिप्त ब’नायो ।
त्यसैकारण उनी यो स्मरणलाई आफ्नो मानसपटलबाट हटाउन चाहन्छन् । त्यसैले यो विषय संचारमाध्यममा नआओस् भन्ने उनको चाहना बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण आफ्ना छोरीहरुलाई सञ्चारमाध्यमले नपछ्याओस् र उनीहरुको जी’वन सु’रक्षा होस् भन्ने ध्येयले नै उनले गिर्वाणी र सुरंगनालाई भारतमा लगेको बुझ्न कठिन छैन् ।
तर उनी एकमात्र यस्ता पात्र हुन् । विश्वमा नै हलचल ल्याएको द’रवार ह’त्याका’ण्डका प्र’त्यक्षदर्शी हुन् । घटनामा घाईते भएरपनि बाँ’चेका हु’न् । उनी यो विषयमा अहिलेसम्म कही कतै बोल्दैनन् । छोरीहरुलाईपनि त्यो घटनाको परिवेशभन्दा निक्कै टाढा राखेका छन् ।
२०५८ जेठ १९ । नेपाली इतिहासको का’लो दिन । द’रवार ह’त्याका’ण्डका रु’पमा चिनिने यो घटनामा राजा वीरेन्द्रसहित बडामहारानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुतिलगायतको ह’त्या भ’एको थि’यो ।